ကျွန်တော်ချစ်သောသူငယ်ချင်းများ: 2007-11 for all my lovely friends
အမ်အိုင်တီ မှ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဌာနများ စာရင်း
သက်ဆိုင်ရာ ဌာန အသီးသီးရဲ့ မူလ စာမျက်နှာများ အောက်မှာ ဘွဲ့ကြို (Undergraduate) နဲ့ ဘွဲ့လွန်(Graduate) အတန်းတွေ အတွက် သက်ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများကို အုပ်စုနှစ်ခု ခွဲခြားပြီး မြင်တွေ့ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်...
အဲဒီ အုပ်စုတွေ အောက်မှာ လေ့လာချင်တဲ့ ဘာသာရပ်၊ စိတ်ဝင်စားတဲ့ သင်ခန်းစာရဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို ဆက်ပြီး နှိပ်ရမှာပါ
Architecture အောက် - Undergraduate Courses ထဲက
4.401 Introduction to Building Technology Fall 2006
ကို လေ့လာချင်တယ် ဆိုရင် အဲဒီနေရာမှာ ကလစ်လုပ် လိုက်တဲ့ အခါ ပေါ်လာတဲ့ စာမျက်နှာမှာ အခုလို
ဘယ်ဘက် အစွန်ဆုံး အခြမ်း
ညာအစွန်ဆုံး အခြမ်း (နှင့် ဒေါင်းလုဒ်ရန်နေရာ)
ဒေါင်းလုဒ်ပြီးနောက် ရလာသည့် ၀င်းဇစ်ဖိုင်ကို ဖြေချပြီး အတွင်းမှ Welcome ဖိုင်ကို ဖွင့်သည့်အခါ မြင်ရမည့် အခြေအနေ
အထောက်အကူပြု ဖိုင်များ ...
ဇစ်ဖိုင် (ချုံ့ထားသောဖိုင်များ) ကို ပြန်ဖွရန် - ၀င်းရာဆော့ဖ်ဝဲ ၃.၆၀ ရယူရန်... ၉၆၉ ကီလိုဘိုက်
ဒေါင်းလုဒ် ရာတွင် လျင်မြန်စေရန် အင်တာနက် ဒေါင်းလုဒ်မန်နေဂျာ ၁၁.၃ နှင့် ပက်ခ်ျဖိုင် ရယူရန်... ၂.၂၉ မီဂါဘိုက်
အေခရိုဘက် ရီဒါ ရယူရန်... ၃၀.၇ မီဂါဘိုက်
ဆက်လက် လေ့လာ ဝေမျှသွားပါ့မယ်....
အင်တာနက်မှ ရသော သတင်းအချက်အလက် များကို စစ်ဆေးခြင်း
ကမ္ဘာတခွင်လုံးက အချက်အလက်များ (Data) နဲ့ သတင်းများ (Information) ကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကွန်ရက် (WWW) မှ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို - ရနိုင်တဲ့ သတင်း အချက်အလက် များစွာ ရှိနေခြင်း နဲ့ ထိုသတင်းများ၏ မူလ အရင်းအမြစ်များကို သိရှိနိုင်ရန် မလွယ်ခြင်းကြောင့် - အင်တာနက်မှ ရရှိလာသော အချက်အလက်များကို စနစ်တကျ စစ်ဆေးတတ်သည့် အလေ့အကျင့်ကောင်း - တစ်ခုကို ကောင်းစွာ မွေးမြူ ထားသင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ သုတေသန တစ်ခု ပြုလုပ်သည့်အခါမှာ ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် တက္ကသိုလ် စာကြည့်တိုက်တစ်ခုတွင် ရှာဖွေလေ့လာသည့် အခါမှာ ဖြစ်စေ.. အသုံးပြုရမည့် စာအုပ်များ၊ ဂျာနယ်များနှင့် အခြားသော အရင်းအမြစ်များဟာ ပညာရှင်များ၊ စာအုပ်ထုတ်ဝေသူများနှင့် စာကြည့်တိုက်မှူးများက ကောင်းစွာ ပြုစု၊ စစ်ဆေးထားပြီး ဖြစ်သည့် အရာများ ဖြစ်ကြပါတယ်... ကျွန်တော်တို့ ရှာဖွေတွေ့ရှိသမျှ အရင်းအမြစ်များ အားလုံးဟာ တနည်းနည်းဖြင့် စစ်ဆေးထားပြီး ဖြစ်သည့် အချက်အလက်များ ဖြစ်ပါတယ်...
ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ အင်တာနက်ကို အသုံးပြုကြတဲ့ အခါမှာ အထက်ပါ အခြေအနေနဲ့ လုံးဝ ကွဲပြားခြားနားသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အချက်အလက်များ မှန်မမှန် စသည်ကို စိစစ် ထားခြင်းမျိုး လုံးဝမရှိသည့် အခြေအနေ ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်.. အကြောင်းရင်းကတော့ -
တို့ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အကောင်းဆုံး အရည်အသွေးရှိသော အရင်းအမြစ်များနှင့်အတူ ယုံကြည်နိုင်ဖွယ်ရာ မရှိသော၊ စိတ်မချရသော စာမျက်နှာ များကိုလည်း အင်တာနက်ထဲမှာ တွေ့ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်... အင်တာနက်သည်ပင်လျှင် အသုံးပြုသူများကို လွတ်လပ်ခွင့် အပြည့်အ၀ပေးထားသော နေရာတစ်ခု ဖြစ်နေတဲ့အတွက် သတင်း အချက်အလက် တစ်ခု၏ အမှားအမှန် ဖြစ်နိုင်ချေကို ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကလည်း သက်ဆိုင်သူ တစ်ဦးချင်းစီမှာပဲ ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်...
အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အချက်အလက်များကတော့ - ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားသည့် အကြောင်းအရာများကို လေ့လာ စစ်ဆေးရာမှာ ပညာရှင်များ အနေနဲ့ အများဆုံး အသုံးပြုလေ့ရှိသည့် စစ်ဆေးနည်းများ ဖြစ်ကြ ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုပြီး အင်တာနက်ပေါ်မှ တွေ့ရှိသော အချက်အလက်များ ကိုလည်း စမ်းသပ် စစ်ဆေး နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်...
စာရေးသူ၊ ရေးထားသည့် နေရာ၊ ရှုမြင်ပုံ သို့မဟုတ် ဘက်လိုက်မှု၊ အခြားသော အရင်းအမြစ်များဆီသို့ ရည်ညွန်းမှု၊ အစစ်အဆေး ခံနိုင်မှု၊ အချိန်နှင့် တပြေးညီ ဖြစ်မှု၊ ၀ါဒ ဖြန့်ခြင်း (Propaganda) သတင်းမှား ပေးခြင်း (Misinformation)၊ လုပ်ကြံသတင်း ပေးခြင်း (Disinformation) စသည်တို့နှင့် စပ်ဆိုင်နေသော အချက်အလက်များ ဖြစ်နေခြင်း ရှိမရှိ၊ စာရေးသူ အကြောင်းအရာနှင့် အင်တာနက်ပေါ်တွင် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ရှိမရှိကို စစ်ဆေးနိုင်သည့် နည်းစနစ်များ ...
စာရေးသူ - ဟာ သတင်း အချက်အလက် တစ်ရပ်ကို စစ်ဆေးရာမှာ အဓိက အသုံးပြုလေ့ရှိသည့် အချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ "ဤ အကြောင်းအရာကို မည်သူ ရေးသနည်း"။ စာရေးသူ တစ်ဦးအတွက် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ စစ်ဆေးကြည့်သင့်တဲ့ အချက်အလက်များကို အောက်မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်...
အကယ်၍ အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာ တစ်ခုမျှ မပါရှိခဲ့ပါက စာရေးသူထံ ဆက်သွယ်နိုင်မည့် လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်အချို့ ပါရှိသင့်ပေသည်
ဖတ်နေတဲ့ စာမျက်နှာမှာ အဖွဲ့ အစည်း တစ်ခုခုရဲ့အမည် ပါဝင်နေခြင်း ရှိမရှိ၊ စာမျက်နှာရဲ့ ခေါင်းစီးနေရာ၊ အခြေနေရာ သို့မဟုတ် ထင်ရှားတဲ့ နောက်ခံရေစာ ရုပ်ပုံ စတဲ့ အစိပ်အပိုင်း တစ်ခုခုမှာ တက္ကသိုလ်တစ်ခုခု သို့မဟုတ် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားခြင်း ရှိမရှိ၊ အဲဒီ စာမျက်နှာကနေ တစ်ဆင့် အဲဒီဆိုဒ်ရဲ့ အုပ်ချုပ်သူထံ ဆက်သွယ် နိုင်ခြင်း ရှိမရှိ
စာရေးသူနဲ့ ဆာဗာတို့ကြားမှာ ရှိနေတဲ့ အဆက်အစပ်ကို သေချာစွာ သိနိုင်ခြင်း ရှိမရှိ.. မိမိ ကြည့်နေသည့် စာမျက်နှာများမှာ စာရေးသူ၏ အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ သို့မဟုတ် ၄င်း၏ ကျွမ်းကျင်မှု နယ်ပယ်ကို မြင်တွေ့ရနိုင်ခြင်း ရှိမရှိ.. သို့မဟုတ် လွတ်လပ်စွာ နေတတ်ကြတဲ့ သဘာဝအရ စာရေးသူနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အနေအထား တစ်ခုမှ မပါရှိခြင်း...
မိမိဖတ်ရှုနေတဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာကို သိမ်းထားပေးတဲ့ ဆာဗာကို စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း ရှိမရှိ၊ dnslookup နဲ့ whois စတဲ့ အင်တာနက် ပရိုဂရမ်များရဲ့ အကူအညီနဲ့ စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်..
ရှုမြင်ပုံ သို့မဟုတ် ဘက်လိုက်မှု က - သတင်းအချက်အလက် တွေဟာ ဘယ်ဘက်ကိုမှ မလိုက်ဘဲ ကြားနေသဘော၊ အရှိအတိုင်း သဘောကို ရနိုင်ဖို့ ခဲယဉ်းတဲ့ သဘာဝကို အမှတ်ရစေပါတယ်.. သတင်း (Information) တစ်ခု ဖြစ်လာစေဖို့အတွက် အချက်အလက်များ (Data) ကို ရွေးချယ်ပုံဖော်ကြတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်၊ ဘယ်ရှုထောင့်ကနေ ကိုယ်စားပြုနေတာလဲ ဆိုတာ ဖြစ်လာပါတယ်.. စာရေးသူတိုင်းဟာ သူဆိုလိုချင်တဲ့ အချက်ကို အထောက်အထား ခိုင်လုံကြောင်း ပြချင်ကြတာ သဘာဝပဲ ဖြစ်ပါတယ်.. အဲဒါကြောင့် သူ့အမြင်အပေါ် အထောက်အကူ ဖြစ်လာစေမယ့် အချက်အလက်များနဲ့ သတင်းများကို အသုံးပြုရပါတယ်.. အင်တာနက်မှာ တွေ့ရှိတဲ့ သတင်းတစ်ခုကို စစ်ဆေးတဲ့ အခါမှာ သင်ကြည့်နေတဲ့ အဲဒီ သတင်းကို ဘယ်သူပေးတာလဲ၊ သူတို့ရဲ့ အမြင် သို့မဟုတ် ရပ်တည်မှု ဘယ်လိုရှိလဲ ... ဆိုတာတွေကို စစ်ဆေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်.. အင်တာနက် နာမည်ကျော်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းများထဲမှာ ၄င်းကို စီးပွားရေးအတွက် နဲ့ရော လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေးတွေ အတွက်ပါ လွတ်လွတ်လပ်လပ် အသုံးချနိုင်ခြင်းလည်း အပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်... အဲဒီနယ်ပယ်များဟာ အချက်အလက်များကို ကောင်းကောင်း အသုံးချပြီး လိုချင်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရောက်အောင် ဖော်လေ့ရှိတဲ့ နေရာများ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ပါပဲ... (ဒီအကြောင်းတွေကိ အသေးစိတ် ဖတ်ချင်ရင်တော့ အောက်မှ ဖော်ပြထားတဲ့ နေရာတွေကနေ သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်...;;)
တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ကြည့်နေတဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာဟာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲဒီ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သတင်းများကို ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့ အပြုသဘောနဲ့ ပုံဖော်ရေးသားထားတာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
တကယ်လို့ အဲဒီ အဖွဲ့အစည်းက ထုတ်လုပ် ရောင်းချနေတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို ကြည့်နေတာ ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ - ကြော်ငြာတစ်ခုကို ကြည့်နေတာ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း - သတိရနေလိုက်ပါ
တကယ်လို့ အခြားသော နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်ရဲ့အင်တာနက် စာမျက်နှာ တစ်ခု (၀က်ဘ်ဆိုဒ် တစ်ခု)က နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကို ဖတ်နေရပြီဆိုရင်တော့ - သင်ဟာ ဆန့်ကျင်ဘက် အမြင်တွေကို ဖတ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်..
ကိုယ် ရှာနေတာက လူသားမျိုးနွယ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သိပ္ပံနည်းပညာ ဆိုင်ရာ သတင်းများကို ရှာဖွေနေတာ ဆိုရင် နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေ အဲဒီလို အကြောင်းအရာမျိုးကို ရနိုင်မရနိုင် စဉ်းစားကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်..
အစွန်းရောက်တဲ့ အမြင်တွေကို အလွယ်တကူ စစ်ဆေး တွေ့ရှိနိုင်လိမ့်မယ် လို့ ဘယ်တော့မှ မယူဆပါနဲ့... အဲဒီလို အမြင်တွေကို ထိုးဖောက် စည်းရုံးနေတဲ့ အင်တာနက် နေရာအချို့ကို ကြည့်လိုက်ရင် ပညာရေးဆိုင်ရာ အတွက်လို့ ထင်ရအောင် လုပ်ထားတာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်.. ပိုပြီး အသေးစိတ် သိချင် ရင်တော့ နယူးယော့တိုင်း ၁၉၉၉ မတ် ၁၈ မှာပါရှိတဲ့ Rising Tide: Site Born of hate ကို ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်
သုတေသနနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု နယ်ပယ် အများစုမှာ အငြင်းပွားဖွယ် မေးခွန်းများစွာ ပါရှိနေပြီး၊ တခါတရံမှာ အချက်အလက် တစ်ခုအတွက် ပိုမို အငြင်းပွားဖွယ် ဖြစ်လာလေလေ၊ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလာလေလေ ဖြစ်တတ်တာ တွေ့ရပါတယ်.. အင်တာနက်ရဲ့ တည်ဆောက်ထားပုံကိုက အသုံးပြုသူတိုင်းကို သတင်းအချက်အလက် ကိုယ်တိုင် ထုတ်လုပ်သူများ အလွယ်တကူ ဖြစ်လာအောင် ဖန်တီးပေးထားတဲ့ အတွက် အမျိုးမျိုး အထွေထွေသော အမြင်များ၊ တဖက်စောင်းနင်း ရပ်တည်မှုများကို အင်တာနက်ထဲမှာ အများဆုံး မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
အညွှန်း - အကူအညီ
Here is another funny & interesting search parameter, working in Google:
intext:" Name Last modified Size Description" intext:"Apache/* Server at"
I think the following query string is more working than intitle:"index of/"
intitle:"index of/"+intext:pdf+intext:"* MB"
Now we can see many valuable Internet resources just like an explorer view of our PC. LOL
-to change Keyword: pdf to - doc, zip, rar, etc... MB to KB in quary and
-to add νm=100 in url.
Google, CGI Proxies & What People Searched for ...
People search which sites in WWW?
People bypass which sites ananymously?
Those are interested things in web.
Google can tell that if we use the following queries:
intext:"Couldn't find address for"
Also, we can get all about working CGI Proxies, Proxy Lists & Resources with this query:
inurl:"/*proxy/*/*/" intext:CGIProxy intitle:CGIProxy
inurl:"/*proxy/*/*/" intext:CGIProxy intitle:"CGIProxy * * *"
inurl:"/*proxy/**/ /" intext:CGIProxy intitle:CGIProxy info
There are too many results may get. However you can see 100 results par page and filter using νm=100 and &filter=1 parameters in Google's URL.
အညွှန်း - Google ကို အသုံးချခြင်း Using Google
ဒီနေ့ဟာ - မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၆၉ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်ရှစ်ရက် ၊ စနေနေ့ ဖြစ်ပါတယ်...
“မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ၀ါကျွတ်မိန့်ခွန်း” တရားတော်ပါ... အကြောင်းအရာ အချို့ကို ထုတ်နှုတ် ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်...
ပထမဆုံးဝါကျွတ်ချိန်မှာ မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့ တရားတော် ဖြစ်ပါတယ်...
ဗုဒ္ဓဘာသာထက် စောတဲ့ ဘာသာနှစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ဟိန္ဒူဘာသာနဲ့ ဂျိန်းဘာသာ...
အဲဒီ ဘာသာတွေမှာ ခရီးသွားပြီး သာသနာပြုတာ ဂျိန်းဘာသာပဲ ရှိတယ်...
ခရီးသွား သာသနာလုပ်ငန်းကို စနစ်တကျ စတင်တဲ့ ဘာသာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်တယ်...
မြစ်ထဲ ချောင်းထဲမှာ စီးဆင်းနေတဲ့.. သွားနေတဲ့ရေမှာ အညစ်အကြေး မရှိနိုင်ဘူး...
မပြတ်ခရီးသွားနေတာဟာ မပြတ်စီးနေတဲ့ ရေလို ဖြစ်ပါတယ်...
တစ်ခုခု ပိတ်ဆို့နေလို့ ရပ်တန့်နေတဲ့ ရေမှာ အညစ်အကြေးတွေ ရှိနေနိုင်တယ်...
("စီးနေတဲ့ ရေဟာ ကြည်တယ်.. သွားနေတဲ့ ဘုန်းကြီးဟာ သန့်ရှင်းတယ်..." - )
မြတ်ဗုဒ္ဓဟာ ဘုရားဖြစ်ပြီး (၄၉)ရက်သာ အနားယူခဲ့ပြီး၊ မရပ်မနား ခရီးသွားခဲ့တာ ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံခါနီး အချိန်မှ ရပ်နားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်...
ရဟန်းတို့ ခရီးထွက်ကြ.. အကျိုးမဲ့ သွားဖို့မဟုတ်ဘူး...
များစွာသော သတ္တ၀ါတွေ အကျိုးဖြစ်ဖို့ လူအများချမ်းသာစေဖို့ ခရီးထွက်ကြ...
လောကကို အကျိုးရှိစေချင်၊ ချမ်းသာရာ ရစေချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ ခရီးသွားကြ၊ နှိပ်စက်ဖို့ ခရီးမသွားနဲ့ ...
မြတ်ဗုဒ္ဓက ၀ါကျွတ်ချိန်မှာ "အမတ" စည်ကို တီးလိုက်ပြီ... နိဗ္ဗာန်တံခါးကို ဖွင့်လိုက်ပြီ...
မျက်လုံးရှိတဲ့ သူတွေ မြင်လိမ့်မယ်၊ နားရှိတဲ့ သူတွေကြားလိမ့်မယ်...
ဥာဏ်မျက်လုံး ဥာဏ်နားကို ပြောတာ ဖြစ်တယ်...
မြတ်ဗုဒ္ဓက အကန်း ကမ္ဘာမှာ "နိဗ္ဗာန်လမ်း"ကို ပြတယ်.. အပင်းကမ္ဘာမှာ "အမတစည်"ကို ထုတယ်..
အသံကြားရုံနဲ့ တရားနာတယ် မခေါ်နိုင်ဘူး...
ဓမ္မဆိုတာ ဘာလဲလို့ သိသွားဖို့ရယ်... အဲဒီအသိကို ဆောင်ထားဖို့
ဆောင်ပြီးရင် ကိုယ်နှုတ်စိတ်နဲ့ တစ်ထပ်တည်းဖြစ်အောင် ကျင့်သုံးဖို့ အဲဒါ အရေးကြီးတယ်...
မြတ်ဗုဒ္ဓက သာသနာပြုတဲ့ အလုပ်ကို ခရီးသွားပြီးပြုခိုင်းခဲ့တယ်...
(ကျောင်းထိုင်ကြဟေ့ ဆိုတဲ့ စာသား ဘုန်းကြီးရှာတုန်းဘဲ...)
ရောက်တဲ့ နေရာမှာ ဓမ္မ ကိုဟောကြ...
(အဓမ္မတွေ သွားမပြောကြနဲ့ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မျိုးလည်း ယူနိုင်တယ်...)
လူတိုင်းဟာ သေရမှာ ကြောက်ကြတယ်...
အသတ်ခံရသူတွေ သေရမှာ ကြောက်သလို...
သတ်တဲ့သူတိုင်းလည်း သေရမှာ ကြောက်တဲ့ သူတွေချည်းပါပဲ..
ဒါကြောင့် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်မသတ်ကြနဲ့ ...
ကြောက်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ကြောက်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်က မသတ်ကြနဲ့...
ဒါမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ဟောကြားချက် တစ်ခုပါပဲ...
မြတ်ဗုဒ္ဓဟာ ကလေးကို ကလေးအရွယ်အလိုက်၊ လူကြီးကို လူကြီးအလိုက် အဆင့်အတန်းအလိုက် နားလည်အောင် ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်...
ဓမ္မဆိုတာ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ဟောကြားချက်များ အားလုံးဖြစ်ပါတယ်...
"ဓမ္မ" ရဲ့ ဂုဏ်သုံးပါး
အစကောင်း အခြေခံကျကျကောင်း၊ အလယ်အလတ်ကောင်း အဆင့်အမြင့်မြင့်ကောင်းခြင်းဆိုတဲ့
ကောင်းခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ "ဓမ္မ" ကိုပြောကြ...
"သီလ" ဆိုတာ စည်းကမ်းပါပဲ..
Universal Discipline - "လောက လူသား အားလုံး လိုက်နာသင့်တဲ့ စည်းကမ်းများ ဖြစ်ပါတယ်..."
စည်းကမ်းကို ထိန်းနိုင်သူတွေဟာ ပြစ်မှုတွေ မကျုးလွန်တဲ့ လူကောင်းတွေ ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်...
လူတိုင်းအတွက် "ကာယကံ၊ ၀စီကံ" လွန်ကျုးမှုတွေ ဖြစ်မလာအောင်...
"သီလ" ဆိုတဲ့ အခြေခံ ကို အရင်ဟောကြ...
ဒီထက် တတ်နိုင်တဲ့ သူတွေ လေ့ကျင့်လို့ရအောင်... စိတ်စည်းကမ်းရှိလာအောင်..
စိတ်ထဲမှာ လွန်ကျုးမှု၊ သောင်းကျန်းမှုတွေ ဖြစ်မလာအောင်၊ ငြိမ်သွားရအောင်၊ ဖြောင့်ဖြောင့်ထား နိုင်အောင်၊ ဖြောင့်မတ်သူ လူကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လာအောင်...
သမာသမတ်ကျတဲ့ လူတစ်ယောက် ဖြစ်လာအောင်၊ စိတ်ပေါ်မှာ ဖြစ်တဲ့ နိဝရဏ တွေကင်းလာအောင်၊ တနည်းအားဖြင့် "သမာဓိ" ဖြစ်လာအောင်၊ လေ့ကျင့်တဲ့နည်းသင်ပေးကြ.. ဒါဒုတိယ အဆင့်
စိတ်ကို ထိန်းပြီး ဖြောင့်ဖြောင့်ထားနိုင်ရင် သမာဓိ ရှိလာမယ်..
အဆုံးတိုင် ကောင်းတာ ပညာ...
ပ = အသေးစိတ် တိတိကျကျ...
ညာ = သိခြင်း နားလည်ခြင်း...
Understanding In Detail ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်...
ပညာ ဆိုတာ မိမိကိုယ်ကို ကောင်းကောင်းနားလည်အောင် လေ့ကျင့်ကြဖို့ အရေးကြီးတယ်...
အောင်မြင်သွားရင် နှလုံးသားမှာ စွဲနေတဲ့ ကိလေသာ အညစ်အကြေးတွေ ကင်းစင်သွားမယ်...
အဲဒီလိုစွဲနေတဲ့ စိတ်အညစ်အကြေးတွေကို ကင်းအောင်လုပ်ဖို့က...
သီလနဲ့ မရဘူး.. သီလက ကာယကံ ၀စီကံပေါ်မှာပဲ ရှိတယ်...
သမာဓိက စိတ်အပေါ်မှာပဲ ရှိတယ် သမာဓိနဲ့လည်း မရဘူး...
စိတ်အဆင့်အတန်း မြင့်အောင် စိတ်သန့်ရှင်းအောင် ခန္ဓာထဲ နှိုက်ပြီး
ငါဘာကောင်လဲဆိုတာသိအောင် "ပညာ" ကျင့်စဉ်နဲ့ ပယ်ရမယ်...
"ဓမ္မ" ဆိုတာ လူ့ဘ၀ကို အဆင့်အတန်းမြင့်အောင် အဆင့်မြှင့်ပေးတဲ့ နည်းစနစ်မျိုး...
သီလကျင့်ရင် Good သမာဓိကျင့်ရင် Right
ပညာကျင့်ရင် အနုသယ အညစ်အကြေး အကုန်ထွက်သွားတဲ့ အတွက် Noble...
ကာယကံ ၀စီကံ အကျင့်ကောင်းရင် Good လောက်ပဲ ရမယ်...
သမာဓိ ကောင်းရင် Right ဖြစ်လာပြီး...
ပညာ ကောင်းမှ Noble ဖြစ်လာမယ်...
မြတ်ဗုဒ္ဓဟောတဲ့ ဓမ္မက လူမှာပဲ လာစုတယ်...
အဲဒါကြောင့် ဓမ္မက လူသာ ပဓာနတရား...
Religion ဆိုတာကတော့ God သာ ပဓာနတရား...
"ဓမ္မ" နဲ့ Religion ခြားနားမှုကို ကောင်းစွာ သိဖို့ အရေးကြီးတယ်...
ဗုဒ္ဓရဲ့ နည်းစနစ်တွေဟာ အရှိအတိုင်း ကိုယ်နှုတ်နဲ့စိတ် တစ်ထပ်တည်းကျအောင် ကျင့်ရတဲ့ တရားတွေဖြစ်တယ်...
ကိုယ်နှုတ်စိတ် သုံးပါး တစ်ထပ်တည်း နေအောင်ကျင့် နိုင်ကြပါစေ...
သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ အဆင့်ဆင့် ကျင့်စဉ်တွေနဲ့ ဘ၀ကို မြှင့်တင်နိုင်ကြပါစေ...
-"မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ၀ါကျွတ်မိန့်ခွန်း" တရားတော် - ရယူနာကြားနိုင်ရန်